Vidio: NASA na-egosi anyị etu oge ajọ ifufe nke afọ 2017 dị. | Netwọk Mgbasa Ozi
Afọ 2017 bụ afọ ọtụtụ n'ime anyị ga-echeta maka ndekọ dị iche iche agbajiri, yana oke ihe onwunwe na mmebi mmadụ mere. Obi abụọ adịghị ya, ihe ịtụnanya kachasị pụta na afọ a nke anyị na-aga ịpụ bụ ikuku mmiri na-ekpo ọkụ, nke oge ya na Atlantic ga-abanye n'akụkọ ihe mere eme maka ịmalite oké mmiri ozuzo iri dị na mbara igwe nke mere ka ọ bụrụ ụdị ajọ ifufe.
Mana enwere ihe ndi ozo anyi na echeghi ichefu: dika oku oku nke California, ma obu ka ifufe si buru ocha si na Sahara rue America.
Ourwa anyị bụ ụwa ebe ị nwere ike ịsị, na ihe niile nwere njikọ. Anyị anaghị echekarị banyere ya, mana ihe na-eme n'otu ebe nwere ike ịmetụta ụwa niile. Oké ifufe Atlantic na-etolite n'akụkụ kọntinent Africa; agbanyeghị, ha metụtara America.
N’afọ a, 2017, enweela ọtụtụ ihe mebiri ọtụtụ ihe, dịka Irma y María, nke ruru ogo kachasị elu na Saffir-Simpson. Agwaetiti ndị na-ekpo ọkụ dị ka Dominica, na Caribbean, bibiri kpam kpam. Na Europe, kpọmkwem na Ireland, ajọ ifufe ahụ rutere n'oge izu nke abụọ nke Ọktọba Ophelia, nke kachasị ike n'ime afọ 30 gara aga.
Olee otú ihe ndị a si malite? Iji gosi ya, NASA’s Goddard Center weputara ihe onyonyo gosiri. N'ime ya, e nwetara data sitere na Satellites n'afọ ahụ na ụdị mgbakọ na mwepụ na kọmputa nkedo.
Nsonaazụ bụ obere vidiyo a dị egwu ebe ị nwere ike ịhụ etu esi butere isi ifufe, ebe ha gara na etu ha siri mee ka ike gwụ ha. Tụkwasị na nke a, ị ga-enwe ike ịhụ etu ifufe si buru obere ntụ, nnu mmiri (na-acha anụnụ anụnụ), ájá sitere n'ọzara Sahara ruo America (na agba aja aja) na anwụrụ ọkụ site na ọkụ ndị a na-emepụta na Pacific (na isi awọ).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Vidio: NASA na-egosi anyị etu oge ajọ ifufe nke afọ 2017 dị
Mepụta eserese mmekọrịta n'etiti oke osimiri